Unqulo & Umoya IZibhalo Ezingcwele Nezibhalo
I-Gurmukhi Mukwel Vowel - A ene-Illustrated Name Pronunciation Guide
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye neSelferensi ye-Phonetic Gurmukhi Laga Matra I-Vowel Mukta - A. Ifoto © [S Khalsa]
I-Phonetic Upelo kunye nesiKhokelo sokuBazisa
I-Gurmukhi Laga Matra - Ii-Vowels kunye ne-Vowel Holders
Isicatshulwa seGurmukhi saseGurbani sifana nealfabhethi yesiPunjabi kunye nabanikazi bezibane ezintathu, abalinganiswa ababini be-nasalization kunye nezikhala ezi-10. Iibhenyile ziqokelelwe ngama- akhar angama - 35 , okanye i-alurkhikhi ze-alfabhethi. I-vowel eyaziwa ngokuba yi "mukta," okuthi "inkululeko" ayinayo isimboli, kodwa iyakhankanywa phakathi kweyonke ikhonkco apho kungabikho enye i-vowel. Isalathisi ngasinye sesibonakaliso simele isandi esisodwa sefontiki. Iilwimi zisebenziswa ngokudibanisa ukuvelisa izandi ezongezelelweyo.
Iibhenyili zisebenzise ekuqaleni kwegama eliqala ngeviliyile njengomnikazi wendawo kwi-vowel, kwaye apho kungekho nantoni phakathi kwezandi zomsindo. Iimpawu zengqungquthela zichazwe ngasentla, ngezantsi, okanye kwicala lamacononti, okanye abo abanamalungelo abo. I-Gurmukhi yintetho yesondlo. Iilwimi ziba nezandi ezifutshane okanye ezide, ezi zigcina zixinzeleleke ngokuphindwe kabini, okanye zibethe. Ulwimi lweGurmukhi luba ne-tonal elinezantsi, ephakamileyo, kunye nohlu lokuphakathi lokungabonakali olungenayo isibonakaliso esibhaliweyo kwaye kufuneka kuvezwe ngokuvakalayo ukuba kufundwa.
I-Mukta iyisilumkiso seGurmukhi.
Gurmukhi Mukwel Vowel emele u- A
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Mukta , emele ifowuni ngomlingisi wesiNgesi, yenye yezinye iinguvo ezi-10 zesigrari seGurmukhi apho kubhalwe khona iGurbani yeSikh.
I-Mukta ithetha ukukhululwa kwaye ke akanalo uphawu okanye umlingiswa ukulimela kwi-alfabhethi yeGurmukhi. Umbonakalo we-Gurmukhi ongabonakaliyo uMukta utyunjwe kuphela ngumgca wokuxhuma ophezulu we- Gurmukhi script . I-Mukta ichazwa phakathi kwamaqononti onke ngaphandle kwalawo alandelwa nge- paireen eneenkcukacha ezibhalwe phantsi ezibonisa ukuba akukho Mukta okhoyo.
I-Romanized Phonetic Upelo kunye neNkcazelo yegama lokuThetha
Izwi lentetho: I- Mukta ibonisa isandi esifutshane esifubeni esisodwa, esibonakaliswe ngu- a . I- voel Mukta ibizwa ngokuba yi - in - bout, okanye i- nother. I-Mukta ihlala ivakaliswa ngokulandela umgcini-magama okanye umbane.
Upelo oluqhelekileyo: Upelo lwe- Romania uMuta luguqulelo olulula kakhulu lwefontiki. Ukupeliswa kwefonetiki kunokuhluka ngokwahlukileyo kwimibhalo yasekuqaleni yeGurmukhi, kunye neenguqu zeRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani nesiPunjabi.
Ezinye i-Phonetic Spellings: Igama elithi Mukta liguqulelwa ngokusebenzisa isiNgesi uhlamvu K ukumela i-Gurmukhi. I-vowel yokuqala yegama M u kta ngu-Aunkar kwaye izandi zifana nowe. Olunye uhlobo olude lwefowuni lopelo lwe- Mukta ngu- Muktaa ngokuxinezeleka kwi-vowel yokugqibela e-Kannaa.
Iipellings ezingalunganga: Uguqulelo lweMukhta lupelo lwepelenti olungenakulungileyo njengoko lusetyenzisa olunye ulonxibelelwano .
Guide Guide Holder
Kwiimibhalo ezibhaliweyo zeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbonisi, zilandelwa endaweni yecala. I-Mukta idibaniswa ngokubambisana ne- volaa . U-Mukta usebenzisa i- volaer ene-Airraa ngaphakathi kwamagama afaka i-vowel combination.
I-Gurmukhi Vowel I-Kanna - AA ene-Illustrated Name Pronunciation Guide
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiNgisi Gurmukhi Laga Matra Vowel Kanna - AA. Ifoto © [S Khalsa]
I-Kanna isilwakhiwo seGurmukhi.
I-Gurmukhi Vowel Kanna Emele iAA
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Kanna , imelwe ngefowuni ngesiNgesi kabini i- aa , yenye yezinye iinguvo ezi-10 ze-alfabhethi yeGurmukhi apho kubhalwe khona iGurbani yeSikh.
I-Kanna ibhaliwe ngokudweba umgca ophantsi ngaphantsi komgca wokuxhuma ophezulu weGurmukhi .
Izwi lentetho: I- Kanna ibonisa isandi eside somlomo ngokubetha okuphindwe kabini okubonakaliswa ngu- aa kwaye ibizwa ngokuba yi - we , okanye i- w. I-Kanaa ibhaliwe kwaye ivakaliswe emva kwayo nayiphi na i-consonant, okanye i-vowel holder, elandela.
Upelo olulula: I-spelling Romanized Kanna yinto elula kakhulu yokuguqulela ifowuni. Ukupeliswa kwefonetiki kunokuhluka ngokwahlukileyo kwimibhalo yasekuqaleni yeGurmukhi, kunye neenguqu zeRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani nesiPunjabi.
I-Alternate Phonetic Spellings: Ifowuni enye ifowuni ende yefowuni i- Kanna i- Kannaa , iguqulelwe ngu-Gurmukhi ikhonkco I-syllable yokuqala ibhengezwa ngezwi elifutshane elivakalayo le-Mukta. I-syllable yesibili inomxholo obini obude obunzima kunye noxinzelelo kwi-vowel yokugqibela. (Igama lesiNgesi eliqhankqalazo linokuxinezeleka okufanayo kwisilumkiso sayo sokugqibela.)
Iipellings ezingalunganga: Ukuguqulelwa kwegama elithi Khanna kuyipelenti engafanelekanga ngefowuni njengokuba ibonisa isiqhelo esichazwe ngokuhlukileyo.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Kanna ibhaliwe emva kwesigxina kunye nokubizwa emva kwegama layo le- Airraa . I-Kanna iphinda isebenzise umbane we- volaa ngaphakathi kwamazwi anehlanganisela ivoel .
I-Gurmukhi Vowel Sihari - I nge Guide Illustrated Pronunciation
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiNgisi Gurmukhi Laga Matra Vowel Sihari - I. Umfanekiso © [S Khalsa]
I-Sihari ingumlomo weGurmukhi.
I-Gurmukhi Vowel I- Sihari emele i- I
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Sihari , emele ifowuni ngomlingisi wesiNgesi, yenye yezinye iinguvo ezi-10 ze-Gurmukhi iscript esibhalwe nguGurbani yeSikh.
I-Sihari ibhaliwe ngokudweba umgca odibeneyo okhohliweyo ngenhla nangaphantsi kumgca odibanisayo wokuxhuma we- Gurmukhi script . Iingqungquthela zengqungquthela ezibhekiselele kwi-consonant ukuba iya kuqala.
Izwi lentetho : I- Sihari inomsindo omfutshane wokubetha isondo esisodwa esifanekiselwa nguwe , kwaye ivakaliswa ngomsindo we-njengoko kunjalo , okanye. I-Sihari isoloko ibhaliwe ngaphambili, kodwa ivakaliswa emva kwegama, okanye i-vowel holder.
Upelo olulula: I-spelling Romanized Sihari yinto elula kakhulu yokuguqulela ifowuni. Upelo lungahluka ngokwahlukileyo kwimibhalo yasekuqaleni yeGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Ukusetyenziswa kweeFonetiki okunye okunye : Uhlobo olude olude lwefowuni lwe- Sihar i- Sihaaree . I-syllable yokuqala yokuguqulela i- Sihaar ee ivakaliswe ngezwi elifutshane elivakalayo i. Ukuxininisa kwizandi zesikhalazo sesibini kunye nesithathu. I-syllable yesibini ibhengezwa nge-aaaa ye-Kannaa ende. I-syllable yesithathu ibonakaliswa isandi eside se-vowel Bihari.
Iipellings ezingalunganga: Upelo oluguquguqukileyo lwe- Seehari alufaki kakuhle.
Kwiimibhalo ezibhaliweyo zeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, ama-vowels ekuqaleni kwegama abhaliwe ngokubambisana nomnikazi wecala. Ekuqaleni kwegama, i- Sihari ibhaliwe ngaphambili, kodwa ivakaliswe emva kwegama layo le-Eerree. I-Sihar iyabhalwa kwakhona ngaphambili, kodwa ivakaliswe emva kokuba i- voer ye-Eerree , ngaphakathi kwamagama enokubambisana nge-vowel.
I-Gurmukhi Vowel Bihari - I-EE kunye neNkcazelo yegama lokuThetha
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic Upelo lweGurmukhi Laga Matra Vowel Bihari - EE. Ifoto © [S Khalsa]
I-Bihari yivoti yeGurmukhi.
I-Gurmukhi Vowel Bihari emele i- EE
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Bihari , emele ifowuni ngesiNgesi kabini i- ee , enye yeeyilingi ezili-10 ze-Gurmukhi script apho kubhalwe khona iGurbani yeSikh.
I-Bihari ibhaliwe ngokudweba umgca odibeneyo okhohliweyo ngenhla nangaphantsi komgca wokuxhuma ophezulu we- Gurmukhi script . Iingqungqo zengqungquthela ezisemva kwesigxina esilandelayo.
Izwi lentetho: I- Bihari inomsindo omde wokubetha nge-double beat beat ebonakaliswe ngu- ee , kwaye ivakaliswa ngomsindo we- ee njenge-yee, okanye oko kukupheka okt . Isibhengezo seGurmukhi i- Bihari ibhaliwe kwaye ibhekiswa emva kokuqhayisa.
Upelo olulula: Uguqulelo lwesiBulgaria i- Bihari yilona lupelo olulula kakhulu lwefontiki. Ukupapashwa okuguquguqukayo kunokungafani kakuhle kwimiqulu yaseGurmukhi yasekuqaleni, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
I-Alternate Phonetic Spellings: Inye indlela yokudala ipeltiki ye- Bihari yi- Bihaaree . I-Gurmukhi i-consonant Babba emele imele ivakaliswe ngomoya. I-syllable yokuqala yokuguqulela i- Bihaaree ibizwa ngezwi elifutshane elivakalayo i. Ukuxininisa kwizandi zesikhalazo sesibini kunye nesithathu. I-syllable yesibini ibhengezwa nge-aaaa ye-Kannaa ende. I-syllable yesithathu ibonakaliswa isandi eside se-vowel Bihari.
Iipellings ezingalunganga: I-spelling transliterated beehari ayifanelekanga.
Isikhokelo sokuThuthukisa iVolkhi Vowel
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Bihari ibhaliwe emva kwayo kwaye ivakaliswe emva kwayo. I-Bihari iphinda isebenzise i- voel holder Eerree ngaphakathi kwamagama afaka i-vowel combination.
I-Gurmukhi Vowel Aunkar - U Nge-Illustrated Name Pronunciation Guide
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiNgisi Gurmukhi Laga Matra Vowel Aunkar - U. Ifoto © [S Khalsa]
U-Aunkar uyisilumkiso seGurmukhi.
Gurmukhi Vowel Aunkar emele u- U
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . U-Aunkar , omelelwe ngefowuni ngumlingisi wesiNgesi u , ungomnye wezandla ezi-10 zesigcaziso seGurmukhi apho kubhalwe khona iGritani yeSikh.
I-Aunkar ibhaliwe ngaphantsi kweqhosha elilandelayo ngokulandela umgca omfutshane onokuthi ulungele, okanye ulungelelaniswe emacaleni omabini (njengezantsi kwesigxina kakhulu).
I-Vowel Igama elithi: Aunkar inomsindo omfutshane we-vowel ngokubetha enye efanekiselwa nguwe obizwa ngokuba ngumsindo we-p u t, ovakalayo njenge- ooo , okanye u-o oo d . I-Aunkar ibhaliwe ngaphantsi, kodwa ivakaliswa emva kokuqhagamshelana.
Upelo olulula: I- Aunkar yokuguqulela i- Romani ifom elula ifom. Ukuprintwa okuguquguqukayo kufakwa kwi-fonotiki kwaye kunokungafani kakuhle kwimibhalo yasekuqaleni yeGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Ezinye i-Phonetic Spellings: Ngezinye iinkcukacha i- Aunkar iyancishiswa ngokukhawuleza ukuze kube lula ngenxa yokupela isipelingi ingabhalwa ngefowuni kunye no- Ankar okanye i- Unkar Ifom ede . I-syllable yokuqala i-Kanora ibhengezwa njenge-aura. I-syllable yesibini ibonmukhi isonon, ebizwa ngokuthi ibambe umoya, i-vowel inomsindo omfutshane we-Mukta, olandelwa yi-aspirated.
Iipellings ezingalunganga: Upelo lwe- Onkar oluguquguqukileyo aluhambanga kakuhle.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Aunkar ibhaliwe ngezantsi kwaye ivakaliswe emva kwayo i-Oorraa. U-Aunkar usebenzisa i- voor umnini- oorraa ngaphakathi kwamagama afaka i-vowel combination.
I-Gurmukhi Vowel Dulankar - OO kunye neNkcazelo yegama elibizwa ngokuba ngumfanekiso
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiGelmukhi I-LAga Matra Vowel Dulankar -OO. Ifoto © [S Khalsa]
I-Dulankar iyisilumkiso seGurmukhi.
I-Gurmukhi Vowel Dulankar emele iOO
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Dulankar , emele ifowuni ngokuphindwe kabini, yenye yezinye iinguvo ezi-10 ze- Gurmukhi script apho kubhalwe khona iGurbani yeSikh.
I-Dulankar ibhaliwe ngaphantsi kweqhosha elilandelayo lilandelayo ngokudweba ezimbini iifethi ezifutshane ezimfutshane ngaphantsi komnye. Ukutshitshiswa kungakunqumla, okanye ukulungelelaniswa kancinane kwimiba yomibini. (njengenqabileyo ye-intsikiti ecacileyo kakhulu, ubeke enye ngaphezulu kwesinye).
Izwi lentetho : I- Dulankar inomsindo omude wokubetha ngokuphindwe kabini okufanekiselwa yiO , kunye nokulula ngenxa yokupeliswa ngamanye amaxesha . I-Dulankar ke kunjalo, ihlala ivakaliswa ngezwi lika- oo njenge-b oo t, l oo t, ne-o oo , okanye okanye njenge-y, I-Dulankar ibhaliwe ngaphantsi, kodwa ivakaliswe emva kokuqhagamshelana.
Upelo olulula: Uguqulelo lwesiRomani iDulankar lona lupelo lweelwimi olulula. Ukuguqulelwa kwenguqu yokuguqulela kungahluka ngokwahlukileyo kwiimibhalo ze-Gurmukhi zangaphambili, kunye neenguqu ze-Romanized nesiNgesi zaseGurbani okanye zesiPunjabi.
Ukusetyenziswa kweeFonetic : I- Dulankar ingaphinda ifakwe ngefowuni i- Dulainkar, okanye i-Dulenkar . Ifom yexesha elide elichanekileyo lefonti eliguqulelwe ngokuprintwa kwipelenti yeDulankar nguDoolainkarh. I- D ye-Dulainkarh imele i-Gurmukhi , kwaye ivakaliswa ngolwimi emva kwamazinyo aphezulu . I-syllable yokuqala inomsindo wexesha elide le- oo. I-syllable yesibini ibonakaliso esifutshane esifakwe ngu-ai we-Dulavan evakalise ukuba isandi njenge-c n. I-syllable yesithathu isilawuli esibizwa ngokuba yi-Gurmukhi sinokuthi ibambe umoya, i-vowel inomsindo omfutshane we-Mukta, olandelwa yi-aspirated.
Iipellings ezingalunganga: Iipellings eziguquguqulelweyo Dulunkar, Dulaunkar , kunye neDulonkar ziyiyo yonke into engalunganga.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Dulankar ibhaliwe ngezantsi kwaye ivakaliswe emva kokuba i-Oorraa yayo. I-Dulankar nayo isebenzisa i- voor umnini- oorraa ngaphakathi kwamagama afaka i-vowel combination.
I-Gurmukhi Vowel Lavan - AE kunye neNkcazelo yegama lokuThetha
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiNgisi Gurmukhi Laga Matra Vowel Lavan - AE. Ifoto © [S Khalsa]
I-Lavan isilumkiso seGurmukhi.
Gurmukhi Vowel Lavan emele i- AE
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Lavan , imelelwe ngefowuni ngamagama angesiNgesi ae , yenye yezandla eziyi-10 ze-Gurmukhi kwincwadi ebhalwe ngayo iGurbani yeSikh.
I-Lavan ibhaliwe ngokudweba i-curve emfutshane efana ne-coma kwi-angle ye-45 degree phezu kwayo. Isiphelo esicacileyo seLavan sithinta umgca wokuxhuma oqingqiweyo wesicatshulwa seGurmukhi ngakwesokunene seqhosha elingezantsi.
Izwi lentetho: I- Lavan inomsindo omdala wokubetha nge-double beat beat efaniswa ngu- ae , ngezinye izikhathi e , okanye i- ay . I-Lavan ibhengezwa ngomsindo olandelwa ngu - e njengen n e n e n e , n i- ai n okanye i-n n, kunye ne-e, ne-e njengoko i ye , okanye i-h ay . I-Lavan ibhaliwe ngasentla, kwaye ivakaliswe emva kokuqhagamshelana.
Iipellings ezilula: Iinguqulelo zesiRomani uLawa kunye neLavan ziyizona zipapa zilula. Abalingisi baseNgesi v kwaye bajonge ukuvulwa kweGurmukhi kwaye banokutshintshana njengoko ukuprintwa kwenguqu yokuguqulela kungahluka ngokuthe ngqo kwiimibhalo zokuqala zesiGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Ezinye iifowuni zokuphala: Iifom yexesha elide elichanekileyo lefowuni elichanekileyo eliguqulelwe ngokuphindaphindiweyo lweLavan liLaavaan okanye Laawaan. Zombini isilwimi sesibini kunye nesibini isilawuli sezilwimi zinexesha elide eliphindwe kabini i-Kannaa. I-syllable yesibini n, okanye ukungabikho kwe-n, ibonisa ukusekwa kwemida kwaye ibonisa iGurmukhi bindi.
Upelo olungalungile: Upelo lwefonetiki Lavam alunganga njengoko umfowuni ubonisa isalathisi se- nastim tipi kunokuba ibindi.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Lavan ibhaliwe ngasentla kwaye ivakaliswe emva kokuba i-Eerree yayo ibhenyile. I-Lavan iphinda isebenzise i- voel holder Eerree ngaphakathi kwamagama afaka i-vowel combination.
I-Gurmukhi Vowel Dulavan - I-A nge Guide Guide Pronunciation
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiGelmukhi Laga Matra Vowel Dulavan - AI. Ifoto © [S Khalsa]
I-Dulavan iyisilumkiso seGurmukhi.
I-Gurmukhi Vowel Dulavan emele i- AI
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Dulavan iboniswe ngefowuni ngabalinganiswa besiNgesi ai , yenye yeeyunithi ezili-10 zesigrari seGurmukhi apho kubhalwe khona iGritani yeSikh.
I-Dulavan ibhaliwe ngokudweba amabini amancinci amfutshane afana ne-coma kwi-angle ye-45 degree ngaphezu koko. Iiphelo eziqingqiweyo zeDulavan zidibanisa (njenge-curvy v) apho zichaphazela umgca odibanisayo we- Gurmukhi kwisalathisi sangasese sezantsi.
Izwi lentetho : I- Dulavan inomsindo omfutshane we-vowel ngokubetha olunye olubonakaliswe ngu- ai , ngezinye izikhathi e . I-Dulavan ichanekileyo ngokuchanekileyo ngesandi se - t, h, okanye c. I-Dulavan ibhaliwe ngasentla, kwaye ivakaliswe emva kokuqhagamshelana.
I-Spellings elula: I- Dulawa kunye ne- Dulavan yiyona ndlela ilula yokupela ngefowuni. Abalingisi baseNgesi v kwaye bajonge ukuvulwa kweGurmukhi kwaye banokutshintshana njengoko ukuprintwa kwenguqu yokuguqulela kungahluka ngokuthe ngqo kwiimibhalo zokuqala zesiGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Ezinye iindlela ze-Phonetic Spellings: Ifom yexesha elide elichanekileyo elichanekileyo le- fula ye- Dulavan i- Dulaavaan okanye i- Dulaawaan. I- D ye-Dulainkarh imele i-Gurmukhi , kwaye ivakaliswa ngolwimi emva kwamazinyo aphezulu . I-syllable yokuqala inomsindo wexesha elide le- oo. Zibini zombini nesibini isilawuli sesilumklomelo sexesha elide eliphindwe kabini i-Kannaa. I-syllable yesibini n, okanye ukungabikho kwe-n, ibonisa ukusekwa kwemida kwaye ibonisa iGurmukhi bindi.
Upelo olungalungile: Upelo lwefonetiki u- Dulavam alunganga njengoko umfowuni ubonisa isalathisi se- nastim tipi kunokuba ibindi.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Dulavan ibhaliwe ngasentla kwaye ivakaliswe emva kombane wayo we-Airraa. I-Dulavan iphinda isebenzise isibonakaliso se- Airraa ngaphakathi kwamagama afaka i-vowel combination.
I-Gurmukhi Vowel Hora - O ene-Illustrated Pronunciation Pronunciation Guide
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic Upelo I-Hora. Ifoto © [S Khalsa]
I-Hora yivoyile yeGurmukhi.
I-Gurmukhi Vowel Hora emele u- O
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Hora , imelwe ifowuni ngamagama abhalwe ngesiNgesi O , enye yezandla eziyi-10 ze-Gurmukhi script apho kubhalwe khona iGurbani yeSikh.
I-Hora ibhaliwe ngokudweba ikhefu elincinci elifutshane elifana ne-~ flipped over, kwaye linyuka kwi-angle ye-45 degree, ngaphezu koko kulandelelana. Ukuphela kweHora kuthinta umgca wokuqhagamshela oqingqiweyo weskripthi se- Gurmukhi ngakwesokudla kwesigcaziso esingezantsi.
Izwi lentetho: I-Hora inomsindo omde wevolumu kunye nokubetha kabini okufanekiselwa ngu- o kwaye ivakaliswa njenge- o e-s, kwaye kunye nesandi se- o kwi-b, w, okanye i- o , kunye ilandelwa ngu- e njengen e n e , okanye iya ku-b o t okanye iya t. I-Hora ibhaliwe ngasentla kwaye ivakaliswe emva kokuqhagamshelana.
Upelo olulula: I- Hora yipelo elula kakhulu ngefowuni, nangona ukupela isipelingi kunokungafani ngokucacileyo kwiimibhalo zasekuqaleni zeGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Ezinye iifowuni zeSelferensi: Ifom yexesha elide elichanekileyo ngefowuni eliguqulelwe ngokuchanekileyo leHora nguHorhaa .Ukuguqulelwa kwegama lesiGrike kungaphinda kufakwe iHoraa . I-syllable yokuqala o ( Hora ) ilandelwa yi-aspirated . I-syllable yesibini i-vowel inexesha elide eliphindwe kabini i-Kannaa .
Upelo olungalungile: Upelo lwefonetiki uHaura alunganga.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. Uhlobo oluvulekileyo lwe-Hora lubhaliwe ngasentla kwaye luchazwa emva kwegama lakhe le-Oorraa. Olunye uguquko oluvaliweyo lweHora lusetyenziswe yimilo yedwa umnikazi wecala oorraa ngaphakathi kwamagama abandakanya ukuhlanganiswa kwamagama.
I-Gurmukhi Vowel Kanora - AU ene-Illustrated Pronunciation Pronunciation Guide
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiNgisi Gurmukhi Laga Matra Vowel Kanora - AU. Ifoto © [S Khalsa]
I-Kanaora yivoli yeGurmukhi.
Gurmukhi Vowel Kanora emele u- AU
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Kanora imele ifowuni ngabalinganiswa besiNgesi okanye , yenye yeeyilingi ezili-10 ze-Gurmukhi iscript apho kubhalwe khona iGurbani yeSikh.
I-Kanora ibhaliwe ngokukrazula ikhefu elincinci elifutshane elifana ne-~ flipped over, kunye ne-angle engama-45, ngaphaya kwe-consonant ilandelayo. Ukuphela kweKhanora kuthinta umgca wokudibanisa ongqambileyo weskripthi se- Gurmukhi ngakwesokunene soqhagamshelwano olungezantsi uze ujikeleze uze uphinde uthinte umgca kwakhona ngakwesobunxele.
I-Kanora inomsindo omfutshane wevoluni ngokubetha olunye olufanekiselwa ngu-au kwaye ivakaliswa ngomsindo we-au njenge-aura, okanye njenge-o kwi-orar. I-Kanora ingentla kwaye ivakaliswe emva kokuqhagamshelana. Ukupeliswa kwegama lesiCraora kuyinto yefonetiki kwaye inokuthi iphinde iphelelwe nguKhanaura okanye i-Knoura, nangona ukupeliswa kungahlukahluka kwiimibhalo zasekuqaleni zeGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Izwi lentetho: I- Kanora inomsindo omfutshane wevolumu ngokubetha olunye olufanekiswa ngu- au . I-Kanora ibhengezwa njenge- au in au ra, l au rel kunye ne-tyrannos au rus, kwaye iyafana ne- oo yewa r. I-Kanora ibhaliwe ngasentla kwaye ivakaliswe emva kokuqhagamshelana.
Upelo olulula: I- Kanora iyona ipelenti yefowuni elula kakhulu, nangona kunjalo isipelingi singahluka ngokuthe ngqo kwiimibhalo zasekuqaleni zeGurmukhi, kunye neenguqulelo zesiRomani kunye nesiNgesi zaseGurbani okanye isiPunjabi.
Ezinye iifomtictic Spellings: Ifom yexesha elide elichanekileyo ngefowuni eliguqulelwe ngokuchanekileyo ngegama lesiKora nguKhanaurhaa .Ukuguqulelwa kwegama lesiRomanisi kungaphinda kufakwe i- Kanaura, okanye iCanaoura . I-syllable yokuqala iyimela i-Gurmukhi, kwaye ibizwa ngokuthi ibambe umoya, i-vowel inomsindo omfutshane we-Mukta. I-syllable yesibili okanye (Kanora) ilandelwa yi-aspirated . I-syllable yesilwelisi yesithathu inesandi esinexesha elide elide leKannaa .
Upelo olungalungile: Ukupeliswa kwefonetiki Kunora , Kenora , kunye neKenoura konke akulungile.
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Kanora ibhaliwe ngasentla kwaye ivakaliswe emva kokuba i-Airraa ingumnikazi wecala.
I-Gurmukhi Nasalization Indicator - I-Bindi enegama elibonisiweyo
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic Upelo lwe-Bindi ngee-Vowels (Laga Matra). Ifoto © [S Khalsa]
I-Bindi ibonisa ukusekwa kwezandi zomsindo.
I-Gurmukhi Nasalization Indicator - Bindi
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Bindi ngumqondiso ovela ngaphaya kwezinye izikhalazi zeGurmukhi ukubonisa ukusekwa kwemida.
I-Bindi ibhaliwe njengeditshana elikrazwe ngaphaya komgca odibeneyo kunye nomgca wokunene kwintetho kunye nezibane.
I-Nasalization IsiGama soBhengezo
I-Bindi ibonisa ukusekwa kwe-vowel, kwaye iyakubonakala ekuqalekeni kwegama kunye negunya lombane, ngaphakathi kwegama, okanye ekupheleni kwegama elingalandelwa yintetho.
Ulungelelaniso lwe-Nasalization Ukubhengezwa kwegama: I-Bindi yomlomo iyandile n of contraction n and edla ngokumelwa ngetekisi n xa upela amagama e-Gurmukhi ngefowuni.
I-Nasalization engalungile Izwi lokubhengezwa: I- Bindi idla ngokungekho ngokuchanekileyo ukuzwakala ngokungathi ngokungathi, njenge-ing, okanye i-ong.
Umzekelo: Igama leGurmukhi Ik Onkar
Ukulungelelanisa iinguqulelo: Ukupeliswa kwefowuni kunye nokuchithwa kweKhaya
Uguqulelo olungalungile : Upelo lwefonetiki kunye nokubiza amagama I-O ng- kar
I-Bindi isetyenziselwa ngokubambisana nezikhenkce:
I-Kanna - ukuvelisa isandi somlenze eside eside.
Bihari - ukuvelisa i-voal sound voen sound.
Lavan - ukuvelisa i-voal long veal .
I-Dulavan ukuvelisa isikhalazo esifutshane somnxeba isin (ukuzwakala ngathi ku-c )
I-Hora - ukuvelisa isandi somlenze wexesha elide oan .
I-Kanora - ukuvelisa i-vowel ephilileyo yomlomo .
Isikhokelo sokuPeliswa kwesiPelo
Upelo: I- Bindi yifom efutshane ifom.
Uhlobo oluthile lwefowuniki: Upelo lweelwimi oluchanekileyo oluchanekileyo luyiBindee . I-syllable yokuqala iqala nge-vowel i- Sihari ibonisa isandi esincinci i -beat enye echazwe emva kwe-Gurmukhi i-consonant Babba emele. I-Bindi igama elizwini eliboniswe yiTi Tipi ebonakala ngaphaya, kwaye encinci ngakwesokunene se-consonant. I-syllable yesibini iqala ngokuphindaphinda i-Gurmukhi eneqhosha elilandelwa yi-Biharee emele i-double ee .
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Bindi ibonakaliswe apha kunye nezikhenkce ezichaphazelayo kunye nabanikazi bazo.
I-Gurmukhi Nasalization Indicator - I-Tipi Ngomfanekiso ogqityiweyo
I-Laga Matra Ukuguquguquka kunye ne-Phonetic IsiNgisi Gurmukhi Nasalization Inkcazelo ye-Tipi. Ifoto © [S Khalsa]
I-Tipi ibonisa ukusekwa kwezandi zomsindo.
I-Gurmukhi Nasalization Indicator - Tipi
Iilwimi zeGurmukhi zifana neefabhethi zesiPunjabi kwaye ziyaziwa ngokuba yi- laga matra . I-Tipi ngumqondiso ovela ngaphaya kwezinye iinguvo zeGurmukhi ngokudibanisa kunye neendononisi ukubonisa ukuhamba kwevolumu.
I-Tipi ibhaliwe njenge-arc ekhutshwe phezulu ngaphaya komgca odibeneyo kunye nomgca wokunene kwintetho kunye neveyile.
I-Tipi ibonisa ukusekwa kwe-vowel. I-Tipi ingabonakala ekuqalekeni kwegama kunye negunya lesibonakaliso, nangaphakathi, okanye ekupheleni kwegama, enesibonakaliso ngokubambisana neqondiyo.
I-Nasalization Ukubhengezwa: I-Tipi ingamelwa yileta n okanye m kwi-spelling spell yamagama kaGurmukhi. I- tipal yangasese ivakalisa njenge- in , okanye i-h mm . I-Tipi ayisetyenziswanga ukubonakalisa ukusekwa kwevolumu ngamazwi agqiba ngevili.
Umzekelo: Igama likaGurmukhi u- Amrit ophethe i- Tipi inakho ukuguqulelwa ngeefowuni ukuba ipapashwe njenge-A nm rit.
I-Tipi isetyenziselwa ngokubambisana kunye nezikhenkce:
I-Mukta - ukuvelisa i-voal voal sound sound, okanye.
I-Sihari- ukuvelisa isandi esifutshane somlomo, okanye im .
I-Aunkar - ukuvelisa i-voal eside ye-nasal un , okanye um .
I-Dulankar ukuvelisa i-voal ye-voal sound oon , okanye i- oom .
Iipellings: I- Tipi yifom efutshane ifompe elula kwaye inokuthi iguqulelwe ukuba ifakwe i- Tipee .
Uhlobo oluthile lwefowunikhi: Uhlobo olude lwefometetally correct spelling translation spelling ngu Tippee . I-syllable yokuqala iqala nge-vowel i- Sihari ibonisa isandi esincinci i -beat enye echazwe emva kwe-Gurmukhi i-Tanka ekhonjiswe nguT (okanye tt) . I-syllable yesibini iqala ngo- Adhak uphawu olubunjwa ngaphezu kwelayini elixhomekeke kwi- connectorong ebonisa ukuba i-consulant ye-Gurmukhi iyandulela iphindwe kabini. I-syllable yesibili i-Pappa imelwe yi-phim ephindwe kabini (njengokw ha k y), kwaye ilandelwa yi-Biharee emele i- ee ee .
Kwimiqulu ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwa endaweni yecala. I-Tipi iboniswe apha kunye nezikhenkce zichaphazela kunye nabanikazi bazo.
I-Oorraa - iGurmukhi I-Vowel Holder Ebonisa umfanekiso weLaga Matra
Uguqulelo kunye neelwimi ze-Phone Oorraa kunye neLaga Matra Gurmukhi Vowels. Ifoto © [S Khalsa]
I-Oorraa ngumnikazi wevoluni yeGurmukhi.
I-Gormukhi umnini-velo Oorraa iqokelelwe kunye ne- almukhi ye-alphabet , okanye i- Akhar engama-35 efana neye-alphabet yesiParjabi.
Kwile mibhalo ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwe esikhundleni salo ngumnikazi wecala. I-Oorraa ingomnye wabanikazi bendawo abathathu bamavoti kaGurmukhi , okanye i- laga matra . I-Oorraa ibonakaliswe apha kunye nee- voga matra izilwanyana kunye nezilinganiso zefonetiki:
U-Aunkar - u njengoko u .
Dulankar - oo njenge- boo t.
I-Hora- o njenge-b o . Ukutshintshana kweyimbo yehora kuza kuphela ngokubambisana ne-Oorraa.
I-Hora ngokudibanisa ne- Aunkar - okanye , isandi eside sezwi-vo o njengoko ku- o , ilandelwa isandi se-vowel esifutshane nje.
I-Airraa - iGurmukhi I-Vowel Holder Ebonisa umfanekiso weLaga Matra
Ukuguqulela kunye ne-Phonetic Spelling Airraa kunye neLaga Matra Gurmukhi Vowels. Ifoto © [S Khalsa]
I-Airraa ngumnikazi wevoluni yeGurmukhi.
I-Gurmukhi umnini-moya we-Airraa iqokelelwe ngeentetho ze- alfabhethi zeGurmukhi , okanye i- Akhar engama-35 efana neye-alphabet yesi-Punjabi. Kwile mibhalo ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwe esikhundleni salo ngumnikazi wecala. U-Airraa ungomnye wabanikazi bendawo abathathu bezandla zaseGurmukhi , okanye i- laga matra . I-Airraa iboniswe apha kunye ne- voga matra vowel kunye neefentiki ezilinganayo:
I-Mukta - njengokuba iphela.
Kanna - njengathi.
I-Dulavan - ai ivakalise njenge - c.
Kanora - au njenge- au ra.
I-Eeree - iGurmukhi I-Vowel Holder Ebonisa umfanekiso weLaga Matra
Ukuguqulela kunye ne-Phonetic Upelo lwe-Eerree kunye neLaga Matra Gurmukhi Vowels. Ifoto © [S Khalsa]
U-Eeree ungumnikazi wecala loGurmukhi.
I-Gurmukhi umninimzi we-Eeree uqokelelwe kunye ne- alkhakhi ze-alfabhethi , okanye ii- Akhar ezingama-35 ezifanayo kunye neefabhethi zePunjabi. Kwile mibhalo ebhaliweyo yeGurmukhi, okanye ulwimi lwesiPunjabi, iilwimi ezingaphendulwanga ngumbononongo zilandelwe esikhundleni salo ngumnikazi wecala. U-Eeree ungomnye wabanikazi bendawo abathathu bamavoti kaGurmukhi , okanye i- laga matra . I-Eeree iboniswe apha kunye ne- laga matra kunye neefomtictic equals:
I-Sihari - mna njengako .
I-Bihari- ee njenge- ee ee .
I-Lavan - ae njenge- ae rie okanye i- e e - e .
Ukuhlanganiswa kweVotelkhi zeGurmukhi ezichazwe ngeLaga Matra
Ukuguqulela i-Phonetic Upelo lwe-Gurmukhi Combinations. Ifoto © [S Khalsa]
Umzekeliso we-Gurmukhi idibeneyo.
Iinguvo zeGurmukhi zifana nezo zi-alphabet zesiPunjabi. Isinye sezilwanyana ezilishumi zeGurmukhi, okanye i- laga matra , sinesandi sazo sefontiki esisodwa. Abanikazi bamavoyile asetyenziswa xa kukho iifowuni ezimbini ezidibeneyo ukuvelisa isandi esitsha. I- laga matra ivakaliswe ngokulandelelana okubhaliweyo okanye kwezinye iimeko apho iilwimi zidibene kunye nomnini omnye wecala, isibonakaliso esingasentla sichazwa kuqala, silandelwa yi-vowel engezantsi.
Umzekelo wendibaniso yesikhombisi i-Kanna ilandelwa yi-Bihari, okanye i -ee eyo kunye kunye nokuvelisa isandi sexesha elide ngathi.
Umzekeliso apha ubonisa ubuninzi bezinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo, kwaye ezingabonakaliyo, ezibonakalayo kwisibhalo seSikh (ukuze kuboniswe):
"USimar Simar uKattae Sabh Rog" uSikh Shabad wokuPhilisa
Izifundo eziphezulu ze-Nitnem kwiGurmukhi nesiNgesi
Isingeniso kwisiGrike seGurmukhi kunye ne-Punjabi Alphabet
Izibonelelo eziphezulu ze "Sacred Sukhmani" Imithandazo, iCD kunye neDownload
Yintoni iGurbani Ethetha Ngomsebenzi WeMarijuana (iBhang)?
AmaSikhh, Imithandazo, kunye Neentsikelelo Zonke Izinto
"I-Mera Bad Guru Govinda" iSikhs Shabad yoKuPhilisa
Imbali ye-Martial Art Style yaseKali
Iimpapa zeMormonad kunye ne-Art Exarbleable ngeCandelo, Isihloko kunye Naphezulu
Indlela yokulwa nokufudumala kwehlabathi jikelele
ISharton School of Business
Ukuhlaziywa kweNcwadi: 'Imisebenzi eqokelelelweyo kaBilly Kid'
I-Adillanova University Admissions
Amaqela e-NHL angakaze ayibone iNdebe yeStanley
Ukungabikho kweFrench French: 'Pas' ngaphandle kokuthi 'Hayi'
Izikolo Zaseburhulumenteni Zamahala e-Arizona
Ukuphuza iGesi - Yintoni Eyona Nendlela Esebenza ngayo
I-Cheerleading Cheers ye-Cheerleaders - I-Basketball
Ukuxhomekeka kwi-imeyli kwi-frontera: qué es (akukho esazisiweyo)
Yintoni Yom Kippur?